Riverside Hot Springs Retreat Private - I-Airbnb
Riverside Hot Springs Retreat Private
I-wifi ekhawulezayo ye-116 Mbps kunye nendawo ekhethekileyo yokusebenzela kwigumbi lokulala.
Wamkelekile kwindawo yethu enoxolo nebukekayo kwintlango ephezulu yaseNew Mexico: indawo yokulala etofotofo, ebekwe kakuhle, enendlu yokulala emithathu enendawo evulekileyo, ipatio yangaphandle yabucala, ibhafu enkulu yemithombo eshushu kunye nesolarium yomlingo-- zonke zikwindawo enemibono emangalisayo kwindawo ezolileyo. yendalo. Siyakumema ukuba uze ucwilise emanzini aphilisayo, ukhuphe i-plug kuxinzelelo lwakho lwemihla ngemihla, kwaye uphumle ekuphumleni nasekuzaliseni.
Indawo yethu yindawo efanelekileyo yokuthomalalisa umzimba, ukuthulisa ingqondo kunye nokuzola umoya, ngelixa ukhuliswa kwaye usondliwa bubuhle bendalo. Kule meko intle, siyakwamkela ukuba uphonononge umhlaba ongaphakathi- kunye namathuba okuphilisa kunye nokuyila. Ukomeleza la mathuba, sinikezela ngothotho olubanzi lwamava kwiziko lethu lokuPhilisa oluQhelekileyo kunye ne-Expressive Arts Centre, iibhloko ezimfutshane ezimbalwa kude.
Nangona kufutshane nombindi wedolophu, indawo yakho yokubuyela emanzini eshushu lihlabathi labucala kulo ngokwayo. Ipatio yangaphandle, ebiyelwe ngocingo olufudumeleyo lomsedare, yindawo engasese evula emazantsi kwindawo ethe saa eRio Grande, iTurtleback Mountain kunye nesibhakabhaka esivulekileyo saseNew Mexico. Apha ungangena kumxholo wentliziyo yakho kwibhafu yakho yabucala evulekileyo yemithombo eshushu.
Ipatio nayo ineSolarium yabucala. Le ndawo ezolileyo, enomtsalane, elawulwa yimozulu ineefestile ezinkulu ezinemifanekiso eshukumayo. Senze iSolarium ukuba ibe nemisebenzi emininzi: unokubeka i-yoga mat; seta itafile yelaptop yakho; sasaza iprojekthi yakho yobugcisa okanye uphumle esofeni ukuze ucamngce ngokuzolileyo, incwadi elungileyo kunye nekomityi yeti, ikofu yakho yasekuseni, okanye iwayini kunye nencoko yasemva kwemini.
Igumbi lokulala elitofo-tofo, elisanda kunikwa igumbi lokulala ezintathu / igumbi lokuhlambela ezimbini libonelela:
* Uhombiso oluthambileyo lwangoku olunemigangatho ye-cork, iiragi zasePersi kunye nomsebenzi wobugcisa wokuqala
* Igumbi lokuhlala elifudumeleyo nelibanzi elinesofa ehonjisiweyo kunye nezitulo ezibini ezitofo-tofo
* Igumbi lokulala elikhulu elinenkosi enkulu, igumbi lokuhlambela kunye negumbi lokuhlambela
* Ikhitshi elixhotyiswe ngokupheleleyo elinayo yonke into oyifunayo ukuze ulungiselele izidlo zakho ozithandayo
* Indawo yokutyela ekufuphi yabantu abane
* Amagumbi okulala amabini ongezelelweyo: elinye linebhedi egcweleyo kunye nelinye linebhedi enamawele omde
* Igumbi lokuhlambela eligcweleyo lamagumbi amabini angasemva
• Gcoba iingubo zomqhaphu zokufunxa amanzi ashushu
* I-600 ibala intambo 100% yamaphepha e-cotton aseYiputa
* Imiqamelo yeHypoallergenic kunye neentuthuzelo
• Amaphepha ongezelelweyo, iingubo, iitawuli kunye nemiqamelo kwigunjana ngalinye
* R/O Amanzi okusela ahluziweyo ekhitshini
* Ikofu yendalo kunye neeti
* IWiFi yasimahla
* Umbindi we-AC/Ukufudumeza
* Ingqokelela yeencwadi encinci, ene-eclectic
*Imoto eneenqwelo-mafutha ezimbini (indawo yokupaka eyongezelelweyo kwipropati)
* Izinyuko ukusuka kwi-carport ukuya kwindlu kwaye ukusuka kwindlu ukuya kwipatio yangaphandle (amanyathelo asi-7 alula ngalinye)
IPATIO YABUCELA KUNYE NEDEKI IBUKA:
* Iveranda egqunyiweyo enetafile yokutyela yabane, iilonge ezimbini zokulala ezinomqamelo kunye netafile esecaleni
* 6’ x 8’ eyenziwe ngokwezifiso, ibhafu yeconcrete egudileyo yemithombo eshushu
* Izitulo ezibini zepatio ezinetafile esecaleni yethayile
* I-Weber charcoal grill kunye nezixhobo. Yiza namalahle akhethiweyo.
*Ngaphambi komlambo, indawo ekhululekileyo, iSolarium elawulwa yimozulu enezihlalo ezi-2 ezitofo-tofo, iitafile ezimbini ezisecaleni, i-yoga mat, iipropu, umcamelo wocamngca, umbhobho wendawo ophuphumayo, isibane esiluzizi, idokhi yesandi seBose, kunye netafile yekhompyuter ekhululekileyo. isitulo. Le yindawo yokusebenza elungele ilaptop.
Ukuntywila kwimithombo eshushu sisipho esimangalisayo esivela kwiNdalo. Amanzi e-geothermal angena ngokunzulu emzimbeni--athomalalisa izihlunu kunye namathambo, ekhulisa ingqondo kunye nomoya. Amanzi ethu okuphilisa anobushushu obuphakathi kwe-104-106º F. Amanzi acwengileyo kwaye akanavumba, aneeminerali ezahlukeneyo ezingama-38 kunye ne-pH elungeleleneyo yesi-7.
Sikhumbuza iindwendwe zethu ukuba ZISELE AMANZI AMANZI ngelixa ufunxa, kwaye nceda ukhumbule ukufudumeza. Sebenzisa ibhafu yeminerali eshushu ngomngcipheko wakho. Ukuntywila kumaqondo obushushu angaphezu kwe-104º F kungabandakanya ukonyuka komngcipheko. Jonga "iMithetho yeNdlu" ngolwazi olungakumbi lokhuseleko malunga nokuntywila kwimithombo eshushu.
* Okungatshayiyo, ukungezwani nesilwanyana sasekhaya kunye nendawo engenamichiza
• Iisepha zendalo, iishampoos kunye nezilungisi zokuthambisa kwigumbi lokuhlambela ngalinye
* Iimveliso zokucoca ezisetyenzisiweyo ziyakwazi ukubola, i-hypoallergenic, i-non-chlorine, izibulala-ntsholongwane zezityalo ezenziwe kwii-oyile ezicocekileyo eziyimfuneko ezibandakanya i-eucalyptus, i-peppermint yesiFrentshi, i-sinamon, i-cloves, i-orenji njl.
* Indlu kunye neSolarium ziindawo ezingenazihlangu
* Ngokuqinisekileyo akukho kutshaya okanye ukutshisa isiqhumiso (ngaphakathi), kwaye akukho khandlela livuthayo (ngaphakathi okanye ngaphandle)
* Iveranda, idesika kunye neendawo zebhafu ezishushu ziindawo ezolileyo (isandi sinamandla amangalisayo wokuhamba unyuka usehla ngomlambo)
* Igumbi lokuhlamba liyafumaneka ukuze uhlale ixesha elide (7+ ubusuku)
* Ukuzijonga ngokwakho ngekhowudi yokutshixa ibhokisi
* Isitshixo esinye sivula zonke iingcango zangaphandle (izibuko lemoto, indlu, isolarium)
I-wifi ekhawulezayo – i-116 Mbps
INYANISO OKANYE IZIPHUMO (T okanye C)
Ngelixa indawo yethu yokurhoxa ngasemlanjeni ibucala kwaye ingasese, ijonge kububanzi obubanzi bendalo engonakaliswanga, kanye emva kwayo kukho indawo yokuhlala kunye nedolophu yasebumelwaneni yesithili saManzi ashushu iT okanye C's. Lo mmandla wawukhe wahlalwa ngama-Apache, yaye intsomi ithi izizwe ezilwayo zazizibeka phantsi izixhobo zazo zize zibe seluxolweni ngoxa zisemanzini aphilisayo. Kwiminyaka kamva, loo manzi afanayo e-geothermal azisa abasebenzi basezimayini, abafuyi kunye namajoni kule ndawo. Iingcambu zika T okanye C zibuyela emva kwelo xesha, malunga nokuphela kweminyaka yoo-1800. Isithili sedolophu sisenemithunzi "yentshona yakudala" kuyo. Kodwa uyilo lwembali ngoku luxutywa nemibala enqabileyo, imizobo epholileyo eseludongeni kunye nemida yevenkile eyilayo echaza idolophu.
INDAWO YOKUHLALA KWISITHILI SAMANZI AMANZI ashushu
Unokuphuma kumnyango ongasemva wendawo yethu kwaye kwiibhloko ezimbalwa ezimfutshane uya kuzifumana kwi-Broadway, ethi kunye ne-Main St. yenza i-loop echaza isithili sedolophu.
I-T okanye i-C Brewery ibonelela ngokhetho olumangalisayo lwebhiya eyenziwe ngobunono. Ungayonwabela indawo yokuhlala yangaphakathi epholileyo, okanye usele utywala bakho ngaphandle kwipatio yangaphambili okanye indawo engasemva. Njengoko izinto ziqala ukuba semgangathweni emva kwe-covid, sijonge phambili ekufikeni komculo ophilayo ovela kumagcisa abakhenkethi, abafumanise i-T okanye i-C's vibe (kunye nobunewunewu bemithombo eshushu!).
Umxhasi we-brewery unoku-odola ukutya okuphumayo kwi-Rooster's Giddy Up Cafe, i-Grapevine Bistro kunye ne-Destiny's Keto Kitchen zisiwe etafileni yabo.
Enye i-T okanye i-C ethandwayo yiPassion Pie, isidlo sakusasa/sasemini sokukhupha i-cafe kunye nee-croissants ezibhakiweyo ezintsha, iipastries ezimangalisayo, ikofu emnandi ngokwenene kunye ne-assortment emangalisayo ye-deli-style sandwiches eyenziwa emva kwemini.
Kwakhona ngaphakathi kwedolophu ye-loop ye-Broadway kunye ne-Main, uya kufumana i-Grapevine Bistro yesidlo sakusasa kunye nesidlo sasemini kunye neendawo zokuhlala zangaphakathi / zangaphandle, kunye ne-A & B ye-drive-in, i-green-chile cheeseburger edibeneyo kunye nokutya okuyinyani kwe-mexican.
Ukuba ujonge i-top-shelf steak kunye ne-lobster dinner house ene-bar epheleleyo, i-Los Arcos yindawo yakho (imizuzu emi-5 nje yokuqhuba ukusuka edolophini).
Phakathi kweegalari ezifafazwe ngeenxa zonke edolophini, izinto esizithandayo yiRio Bravo, apho unokujonga imizobo yoqobo evela kumagcisa adumileyo, uDelmas Howe kunye noJoe Waldrum; i-Desert Archaic, ebonisa umsebenzi we-eclectic kaKyle Parker Cunningham, uJeannie Ortiz kunye namanye amagcisa asekuhlaleni, kunye nendalo engaqhelekanga kaJeannie yokuluka; iGalari yeZiko kunye neGalari yeAbbey yamaGcisa.
Igrosari yethu yasekhaya, iiBullocks, yimarike yedolophu encinci enokhetho olumangalisayo lwezinto ezisempilweni, eziphilayo kunye nesebe lotywala elimangalisayo elinezinto ezininzi zebhiya, iwayini kunye nespirit.
Ukuba ujonge imisebenzi yangaphandle, qwalasela uhambo oluqhelekileyo kwi-Healing Waters Trail, ehamba ngaphezu kweRio Grande kwaye ijonge phezulu kwiNtaba yeTurtleback. Ukwenzela amabhongo ngakumbi, kukho iindawo ezintle zokuhamba kuyo yonke indawo ngaphakathi komgama omfutshane wokuqhuba. Ngexesha lasehlotyeni, yonwabela ukudada kwiityhubhu zangaphakathi ezinobukhulu obugqithileyo phantsi kweRio Grande, uzulazula ngento epholileyo egcwele izimuncumuncu kumhlaba omhle wentlango.
Ngokubanzi, i-T okanye i-C yi-"carpe mañana" uhlobo lwendawo - i-bona fide hot springs mecca enesantya esithandekayo, esibuyisela umva. Incinci, idolophu encinci enqabileyo ene-eccentric eccentric, ikhaya kwinani elikhulayo labantu abayilayo ababonakalisa umbono wabo kunye nokwabelana ngeenqobo zokwenyani zoluntu.
Sifumaneka ngokulula ukunceda iindwendwe ngayo nayiphi na imibuzo okanye iimfuno ezingalindelekanga.